Unqulo & Umoya Iingcamango nokucamngca
I-Samhain iyaziwa ngobusuku xa isigqubuthelo phakathi kweli hlabathi nakwesilandelayo sisona saso. Yisihlandlo sokuhlala kwaye uzukise ihlabathi lomoya, kwaye ubiza abo okhokho ababeza phambi kwethu. Emva koko, ukuba kungekhona kubo, asiyi kuba apha. Sinesibopho kubo into, ukubulela ngenxa yokukwazi ukuphila, amandla abo, umoya wabo. Amapagan amaninzi akhetha uSamhain njengethuba lokuhlonela ookhokho bawo.
Ukuba le nto ungathanda ukuyenza, unokubhiyozela ngesithethe okanye ngokubamba isihlalo okanye isidlo sangasidingi ngokuhloniphekileyo:
Ukuhlonipha i-Ancestors eSamhain
Ukusingatha isidlo sesidlo
Indlela Yokubamba Isidima
Ukongeza kule mizila engaphezulu, ungaphinda ufune ixesha elilodwa ukucamngca. Le ngongoma kwi- Wheel yoNyaka xa ihlabathi lomoya lisondele ngakumbi kunokuqhelekileyo, kwaye ukuba awuzange uzame ukudibanisa nookhokho bakho ngaphambili, ngoku ixesha elifanelekileyo lokukwenza.
Xa wenza ukucamngca okhokho, abantu bafumana izinto ezahlukeneyo. Unokuzifumana udibana nomntu othile owaziyo kwimbali yakho yentsapho-mhlawumbi uvile amabali malunga nomalumekazi omkhulu uJoe owaphuma ngasentshonalanga emva kweMfazwe yoLuntu, kwaye ngoku unelungelo lokuthetha naye , okanye mhlawumbi uya kuhlangana nogogo owadlula xa usengumntwana. Nangona kunjalo, abanye abantu bahlangana nookhokho babo njenge-archetypes.
Ngamanye amagama, kungenjalo umntu ongeyena umntu odibana naye, kodwa kunokuba isimboli-endaweni yomalumekazi omkhulu, u-Joe, unokuba ngumkhosi weMfazwe oyiNkunzi okanye umda welizwe. Ngayiphi na indlela, qonda ukuba ukuhlangana kwaba bantu isipho. Bekela ingqalelo kwizinto abazithethayo nokwenzayo-mhlawumbi bazama ukukunika umyalezo.
Ngaphambi kokuba wenze oku kucamngca, akusiyo ingcinga embi ukuchitha ixesha kunye nezinto ezibonakalayo, ezibonakalayo kwintsapho yakho. Yenza i-albhamu yesithombe esidala, funda kwi-diary yasendle yase-Tillie yodayari evela kwi-Depression enkulu, phumela umlindi wakho omdala osepokothweni owawuphantse uguqulwe ngeTitanic. Ezi zizinto eziphathekayo ezidibanisa nentsapho yethu. Zidibanisa nathi, ngokumangalisayo nangokomoya. Sichitha ixesha kunye nabo, ukuxhamla amandla abo nokucinga ngezinto abazibonayo, indawo ababeye kuzo.
Unokwenza lo mkhwapho naphi na, kodwa ukuba unokwenza ngaphandle kwebusuku unamandla ngakumbi. Ukuhlobisa isibingelelo sakho (okanye ukuba ungaphandle, sebenzisa ilitye elityebile okanye umthi womthi) kunye nemiqondiso yookhokho bakho - iifoto, iigrari, iimbali zemfazwe, iilindo, ubucwebe, njl. Ukuba ufuna ukukhanyisa enye, yenza njalo. Ungaphinda ufune ukutshisa impepho yomoya waseSamhain .
Ukumangalisa Ubulungisa bakho bokuzalwa
Vala amehlo akho uphefumle. Cinga ngoobani, kunye nento oyenziwe ngayo, kwaye uyazi ukuba yonke into ngaphakathi kwakho isisombululo sabo bonke okhokho bakho. Ukususela kumawaka eminyaka edlulileyo, izizukulwana zabantu ziye zahlangana kunye neenkulungwane ukudala umntu okhoyo ngoku.
Cinga ngamandla akho - kunye nobuthathaka - kwaye ukhumbule ukuba bevela kwindawo ethile. Eli lixesha lokuhlonela ookhokho abakhele.
Phinda ulandele imilayezo yakho - ngokuvakalayo ukuba uyathanda - kude kube lula ukuba uhambe. Njengoko uthetha igama ngalinye, chaza umntu kunye nobomi bakhe. Umzekelo unokuhamba into enje:
Ndiyintombi kaYakobi, olwa eVietnam
kwaye ubuyele ukuxelela ingxelo.
UJames wayengunyana ka-Eldon noMaggie,
odibene kwiimfazwe zaseFransi,
njengoko wamnceda kwimpilo.
U-Eldon wayengunyana ka-Alice, owahamba ngomkhumbi
e- Titanic waza wasinda.
UAlice wayeyintombi kaPatrick noMolly,
owalimi umhlaba wase-Ireland, ngubani
waphakamisa amahashe kunye nesantya esicatyiweyo sokutya abantwana ...
kwaye nakanjalo. Buyela emva kokuthanda kwakho, ukucacisa kwiinkcukacha ezininzi njengoko ukhetha. Emva kokuba ungayi kubuya kwakhona, phelisa "abo abo igazi labo ligijima kum, elingamagama abo andingazazi".
Ukuba kwenzeka ukuba uhlangabezane nokhokho othile, okanye i-archtype, ngexesha lokucamngca, thabatha umzuzu ukubonga ngokuyeka. Qaphela nayiphi na ulwazi abanokukunika yona-nangona kungenangqiqo nje ngoku, mhlawumbi kamva xa unika ingcinga. Cinga ngabo bonke abantu ovela kuzo, iinjengezo zabo ziyingxenye yenu. Abanye babe ngabantu abakhulu-abanye, kungekhona kakhulu, kodwa ingongoma, bonke bayabakho. Bonke baye banceda ukuma nokukudala. Baxabise oko babenakho, bengalindelanga okanye baxolise, kwaye bazi ukuba bakubukele.
Reiki 101: Amandla okuPhilisa
I-Beltane Bale Fire Tradition
Imfazwe Yehlabathi II: PT-109
I-Neutron Stars Ikhohla kwi-Millisecond Flash ekhanyayo